Hiran State - News: Doorashadii madaxweynaha Somaliya iyo oo dhaceysa bisha July.
Doorashadii madaxweynaha Somaliya iyo oo dhaceysa bisha July.
Kenya: (hiranstate.com)- Qaramada midoobay oo tixgalineyso madax banaanida umada Somaliyeed una hogaansameysa go,aankii baarlamaanka Somaliya ayaa sheegtay iney doorashada Madaxweynaha Somaliya ay dhaceyso xiliga ay qorsheynayaan baarlamaanka Somaliya oo ah bisha July.
Shirar isdaba joog ahaa oo shaley ilaa maanta u socday qaramada midoobay oo ay ku doonayeen iney kaka horyimaadaan go,aankii barlamaanka ayey is tusiyeen in Somaliya yahay dal xor ah baarlamaanka hada jirane yahay midka ugu sareya dhinaca sharciga dalka Somaliya ahna kii soo dooratay madaxweynaha hada talada haya halka uu isaga soo doortay wasiirka 1aad ayaa ugu danbeyn meesha ka saaray hamigii madaxweynaha iyo Farmaajo ay ku doonayeen iney umada hor taagnaadaan 12 bilood oo hada kedib ah.
Wakiilka qaramada midoobay ayaa ku tilmaamaya wax lagu qoslo waxa ay Farmaajo iyo Shiikh Shariif sameynayaan kuna tilmaamay go,aankii baarlamaanka midka saxda ah ee aan ka hadalka laheyn.
Baarlamaanka Somaliya ayaa laga yaabaa iney si deg deg ah ugu yeeraan R/wasaare Farmaajo maadama ay xukumadiisa ku fashilantay 100kii maalmood ee ay qabsatay taas oo soo dedejin karta in cod loo qado xukumada hada jirta ee iyadu qeybta ka ah qaska Somaliya. baarlamaanka Somaliya ayaa hadii uu ku guuleysto inuu soo dhiso gudigii doorashada bisha July dhaceysa qaban qaabin lahaa ayaa laga yaaba iney cod u qaadaan xukumada Farmaajo oo hadii ay kalsoonida golaha baarlamaanka weyso uu dalka sii hogaaminayo inta waqtiga doorashada laga gaarayo gudoomiyaha baarlamaanka maadama ay madaxweynaha iyo R/wasaaruhu ku fashilmeen iney wax ka qabtaan Amaanka Mogdisho oo ay ka saari waayeen kooxaha mayalka adag.
wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arimaha Somaliya oo wareysi dheer siiyey wakaalada wararka Associated Press (AP) ayaa daboolka ka qaaday in isqabqabsiga hogaanka sare ay cuuriyaamiyeen geedi socodkii nabada 6dii sano ee ina dhaaftayna aysan wax badan qabsoomin. waxaa kale oo uuintaasi ku daray si Dastuurka cusub loo bad baadiyo waa in xukumad cusub iyo hogaan cusub loo helo dalka Somaliya.
La soco go,aanka qaramada midoobay oo dhameystiran goor dhaw.
· admin on March 29 2011 18:07:14 · 0 Comments · 2028 Reads ·
14,581,382 unique visits